Ime ụlọ ịsa ahụ nwere akwa ya na enyo na oval na ihe ngosi - Ntule: L.86 P.54 cm - Mechie: Pụchasị fuchsia gloss - Elu: Console zuru ceramic Decò kpochapụwo cm 90 - 100% mere na --tali - Dafne Design
Ụlọ nkwonkwo ị na-asa ákwà na ihe nkedo na okwute oval na ihe ngosi - Rụpụta: L.86 P.54 cm - Kwụsị: Kwụsị Fuchsia pearl gloss - Top: Console zuru ezu yamiki Mkpebi kpochapụwo cm 90 - 100% mere na Italy
Home shop Ngwaahịa anyị Ime ụlọ ịsa ahụ nwere akwa na akwa na oval ...
Home / shop / Bathroom furniture / Ngwá ụlọ ụlọ ịwụ ahụ / Ime ụlọ ịsa ahụ nwere akwa na akwa na oval mirror na ihe ngosi - Ntule: L.86 P.54 cm - Emecha: mechaa fuchsia pearl dị elu - Elu: Ihe ceramic console Decò kpochapụwo cm 90 - 100% emere na Italytali
Ime ụlọ ịsa ahụ nwere akwa ya na enyo oval na ihe ngosi - Ntule: L.86 P.54 cm - Emechaa: okpu Fuchsia gloss - Elu: Console zuru seramiiki Decò kpochapụwo cm 90 - 100% emere na Italy ọnụ ọgụgụ
okporoko: H5-H1EV-3FLG Atiya: Ngwaahịa anyị, Ngwá ụlọ ụlọ ịwụ ahụ Product ID: 20468
Akpokọta ihe eji eji ngwá ụlọ nwere ụdị onwe ya, nke a kpochapụrụ n'ụzọ dị ugbu a, na njirimara nkà na ụzụ na njedebe kacha mma. Ihe ndị ahụ dị na ngwụcha amachasị nke ọma, ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha dị oké ọnụ ahịa na osisi oak na-agwụcha: ukpa na decapè.
Ebu aha 10 mbụ a na-akpọ "Nkọwapụtachasị" na nke a na-ejikarị ụdị ọgbara ọhụrụ na nke dị iche iche. Ihe ọzọ 7 a na-akpọ aha bụ "Deceti" ma bụrụ ụzọ dị iche iche nke ụzọ anyị si eche echiche karịa ụdị "Deceti".
n'ihe: L.86 P.54 cm
imecha: Fuchsia glossy pearly imecha
top: Allceramic njikwa Deco classic cm 90
2 Wardrobe Ante, maka ụlọ ime ụgbọala, H. 202 X P. 57 X L. 120 cm - Ụdị nke ụgbọ ala
Ihe eji eme ya: Ogwe - Agba: nwa - Nlekọta: 3 - Ogwe ákwà - Akụkụ - 48 cm - 40 cm - H 187 cm - Kwesịrị maka ụlọ nwata - - ụdị nke oge - mobile imewe - ihe onwunwe - (SF11)